सचिन तेन्दुलकरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरे भेट —
काठमाडौं मंसिर १,। भारतका चर्चित क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली संग भेट गरेका छन् ! प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली लाइ भेट्न को लागि सचिन तेन्दुलकर आइतबार बालुवाटार पुगेका थिए ! युनिसेफको ब्रान्ड एम्बेसडरका रुपमा तेन्दुलकर अस्ति (शुक्रबार) नेपाल आएका हुन् । उनले शनिबाबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बालबालिकाहरुसँग क्रिकेट पनि खेलेका थिए । आज बिहान उनी पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा तेन्दुलकरले बालबालिकाहरुको कल्याण र अधिकार प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयासको सह्राहना गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस !पूर्व राजा परिवार सँग नायिका पूजाको भेटघाट, सार्वजनिक गरिन् तस्बिर (तस्बिर सहित)
काठमाडौँ १ मङ्सिर / चर्चित अभिनेत्री पूजा शर्मा पछिल्लो समयको महँगी नायिका हुन् । उनी अभिनीत चलचित्र “पोइ पर्‍यो काले” देशै भरको हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ भने, नायिका शर्माको आफ्नै चलचित्र ” म यस्तो गीत गाउँछु २” को छायाङ्कन पनि भइरहेको छ’ जसमा पल शाह र पूजालाई प्रेम जोडीको रूपमा देख्न पाइने भएको छ ।